Usoro Ọrụ - Gamepron
Usoro ọrụ (“Okwu”)
Emelitere ikpeazụ: Jenụwarị 5th, 2021
Biko gụọ Usoro Ọrụ ndị a ("Okwu", "Usoro nke Ọrụ") nke ọma tupu i jiri websaịtị https://gamepron.com ("Ọrụ").
Must ga-enyerịrị ezigbo ozi achọrọ iji mezue usoro ntinye aha.
Ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ maka ọnwụ data ọ bụla, ngosipụta nke data ma ọ bụ mmebi mebiri nke ga-esi na ịchekwa paswọọdụ na akaụntụ gị.
Ga-emebi iwu ọ bụla ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-enwetaghị ikike ma ọ bụ iji iwu eme ihe mgbe, yana site na iji ọrụ ahụ.
Ga-ahụ maka ọdịnaya na mmemme niile emere n'okpuru akaụntụ gị.
Ga-abụrịrị afọ 15 ma ọ bụ karịa iji Ọrụ a.
Nkwado dị naanị maka ndị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ site na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Ojiji nke Ọrụ ahụ bụ naanị ihe egwu gị. A na-enye ọrụ na ntọala "dị ka ọ dị".
Gaghị eregharị, detuo ma ọ bụ mepụtaghachi ọrụ ahụ, ma ọ bụ akụkụ ọ bụla, na-enweghị ikikere ederede site na Ọrụ ahụ.
Egwuregwu. anaghị enye ikike na ọrụ ahụ ga-aza mkpa gị, enweghị njehie, ga-echekwa ma ọ bụ na ọ ga-adị mgbe niile.
Ọrụ ahụ nwere ikikere ya iwepu, ma ọ bụ iwepụ, ọdịnaya ọ bụla nke iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na-akpasu iwe. Agbanyeghị, mmetọ ọ bụla edepụtara ma ọ bụ iyi egwu emere na akaụntụ ga-eme ka ịkwụsị akaụntụ ahụ ozugbo.
Express ghotara ma kwenye na Ọrụ ahụ agaghị akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla ma ọ bụ na-enweghị isi, gụnyere mana ọnweghị oke mbibi maka ọnwụ nke data, uru, ma ọ bụ ihe ọghọm ndị ọzọ na-enweghị atụ sitere na iji ọrụ ahụ ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi.
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ na ijide Ọrụ ahụ na ndị mmekọ ya, ndị isi ya, ndị ọrụ ya, na ndị ọrụ ya pụọ ​​na ọnwụ ma ọ bụ iyi mfu ma ọ bụ ụgwọ n'ihi ụgwọ ma ọ bụ ikike nke Ọrụ ahụ ma ọ bụ na-esite na nkwupụta ọ bụla maka mmebi. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Ọrụ ahụ ga-enye gị ọkwa ederede nke nkwupụta, ụdị ma ọ bụ omume dị otú ahụ.
Nweta & Mmekọrịta
I kwenyere na ị bụghị onye ọrụ nke Microsoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, 2K Games, Activision, ma ọ bụ Offworld Industries, na ị bụghị onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ onye maara nke anyị kwuru n’elu.
I kwenyere na ị bụghị onye ọrụ nke ụlọ ọrụ iwu ọ bụla nyere nkwekọrịta na Microsoft, The Coalition, Nexon, Wargaming, Ubisoft, Studio Wildcard, Electronic Arts, DICE, Reto-Moto, Rockstar, 2K Games, Activision, or Offworld Industries and not a onye otu ezinaụlọ ma ọ bụ onye maara ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
I kwenyere na ị bụghị onye ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla na-enye ọrụ aghụghọ aghụghọ gụnyere Punkbuster, Valve, GameBlocks, Battleye ma ọ bụ EasyAntiCheat, na ị bụghị onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ onye maara nke a kpọtụrụ aha na mbụ.
Are bụghị onye ọrụ nke ụlọ ọrụ mmepe egwuregwu ọ bụla.
Are na-azụghị site na saịtị anyị maka ebumnuche nyocha ọ bụla.
I kwenyere na ị gaghị ewere onye ọzọ.
Nwere ike ịgaghị enweta Ọrụ ahụ, weebụsaịtị, weebụsaịtị, ma ọ bụ ngwanrọ nke Ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na otu n'ime usoro ndị ahụ dị n'elu metụtara gị.
Ọ bụrụ n ’imebi nke ọ bụla dị n’elu, ị kwenyere ịkwụ Gamepron $ 30,000 USD maka nbanye ọ bụla na ngwanrọ na ọgbakọ anyị.
Egwuregwu. Agaghị eme ihe ọ bụla ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla ziri ezi, n'ụzọ na-apụtaghị ìhè, nke merenụ, pụrụ iche, ntaramahụhụ, ma ọ bụ mmebi ọ bụla metụtara, kpatara ọdịnaya ma ọ bụ nnweta weebụsaịtị.
Igodo CD, Igodo licenese, Igodo Ngwaahịa_____________________________
Ihe ndekọ egwuregwu ọ bụla, ihe ndekọ n'ịntanetị, egwuregwu, igodo, na kọmputa bụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eji ma ọ bụ na-eji software anyị eme ihe ma machibido gị iwu, a ga-ahụ ya dị ka ibu ọrụ gị.
Mgbe ịzụrụ ọrụ ndenye aha na weebụsaịtị anyị, ndenye aha ahụ ga-amalite mgbe anyị gosipụtara nkwenye gị. Ndenye aha ga-akwụsị na njedebe nke oge a zụrụ; Anyị anaghị egbochi ndenye aha na okwu ọ bụla, belụsọ na anyị kwuru ya. Ọ bụrụ n'ịzụrụ ndenye aha na-aga n'ihu nke na-emegharị na njedebe nke ọnwa ọ bụla ị nwere ike ịkagbu nke a site na ibe ụlọ ahịa anyị ka akwụghị gị ụgwọ ọnwa na-abịa. Ndebanye aha nwere ike inye ikikere na-enweghị oke iji sọftụwia nke enwere ike ịnweta maka ndị ọrụ nke otu ndị ọrụ VIP dị iche iche, agbanyeghị nnweta a nwere ike ịdabere na nkwụsị, mmezi nkwụsị ma ọ bụ ịkwụsị. Na nke ụfọdụ a ga-akwụ ụgwọ. Igodo mmeghe ikike ndebanye aha ga-enye oge maka ndị ọrụ iji nweta ọrụ ngwanrọ anyị na-enye.
Ndị ọrụ agaghị edebanye aha igodo ọhụrụ ruo mgbe oge ndenye aha gị dị ugbu a gwụchara. Oge ndenye aha anaghị agbakọ mana ọ ga-arụ ọrụ n'otu oge ma ọ bụrụ na edebara ihe karịrị 1 igodo n'otu akaụntụ ahụ. Anyị agaghị agbanwe / tinye oge ndenye aha na akaụntụ ndị ọrụ n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ karịa igodo 1 n'oge oge ndenye aha rụọ ọrụ.
N'ihe banyere onye ahịa chọrọ ịgbanwe ọrụ, ọ ga-edobe 20-40 USD "ego mgbanwe" yana a ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa. A naghị enyekarị igodo nke igodo na ọ bụ ndị nchịkwa nke weebụsaịtị ịhọrọ ọnọdụ nke enwere ike itinye ya n'ọrụ. N'ihi ya, onye ahịa enweghị ike ịtụ anya inwe ike ịgbanwe ọrụ site na oge ndenye aha ha.
Mgbe ịzụrụ software ị ga-enweta otu igodo, na ohere ibudata ngwanrọ ahụ, Ozugbo ị natara / lelee igodo ahụ, a gaghị enyeghachi nkwụghachi.
Nyefere ndị isi ihe na-eme ka ndị ọzọ kwere, site na ịme nke a oge ọ bụla a ga-ewepụ ya na igodo ikike gị na akpaghị aka.
Ọ bụ ọrụ gị ịlele ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ dakọtara na kọmputa gị, ejiri ngwaahịa Intel niile na-arụ ọrụ na Intel CPU pụtara n'ụzọ doro anya na ibe ngwaahịa ahụ. Agaghị akwụghachi nkwụghachi ma ọ bụ enweghị igodo ọhụụ maka ngwaahịa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịmee mmejọ a. Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na anyị enwetabeghị igodo ahụ, ị ​​chọpụta nke a, anyị ga-enye gị ngwaahịa ọzọ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ bụ otu ma ọ bụ pekarịa ụgwọ a kwụrụ.
Ọ bụ ọrụ gị ịlele ọnọdụ ngwaahịa a, anyị agaghị ewepụta nkwụghachi ma ọ bụrụ na ngwaahịa a adịghị n'ịntanetị ma ọ bụ na-anwale. Ga-echere ruo mgbe ngwaahịa laghachiri na ntanetị ma ọ bụ na anyị ga-enye gị ngwaahịa ọzọ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ ma ọ bụ dị ọnụ ala karịa.
Anyị debere ikike iwepu atụmatụ ọ bụla nke ngwaahịa ọ bụla n'oge ọ bụla. Anyị na-eme nke a n'ihi ịchebe gị na egwuregwu. Anyị na-agbasi mbọ ike weghachite atụmatụ ndị ahụ mana n'oge gị enwere ike iwepu otu ma ọ bụ abụọ atụmatụ. Biko kpọtụrụ nkwado site na nkata ndụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ewepụrụ atụmatụ ọ bụla tupu ịzụta gị, ọ bụrụ na ịzụta ma wepụkwa ụfọdụ atụmatụ anyị debere ikike ịghara ịnye nkwụghachi.
Biko lelee na livechat / nkwado iji hụ ma ngwaahịa a dị na ngwaahịa, ọ bụrụ na ọ bụghị na ngwaahịa ọ nwere ike were ụbọchị 1-2 ụbọchị iji nyefee n'ọnọdụ ndị siri ike, nnyefe nke igodo na-ejikarị eme ozugbo ma ọ bụ n'ime awa ole na ole ma ọ bụ nkeji .
N'ọnọdụ ọ bụla inwere ajụjụ gbasara usoro ọrụ ndị a, ị nwere ike zigara ya [email protected]